यस्ता मानिसलाई कदापी पनि आफ्नो साथी नबनाउनुस् Nepalpatra
यस्ता मानिसलाई कदापी पनि आफ्नो साथी नबनाउनुस् । भनिन्छ गाँस छोड्नु साथ नछोड्नु । मानिसको जीवनमा सहृदय र सद्भाव भएका सच्चा साथीहरुको पाइलाका डोबहरु र अनुहारहरू यादगार हुन्छन्, कति उदाहरण त यूगौंयूग अमर भएर बाँचिरहन्छन् भगवान कृष्ण र सुदामा जस्तो बनेर । जब ठूलो हुँदै जान्छ, अनि रगतसँग कुनै साइनो नजोडिएकाहरु पनि उसको जीवनमा जोडिन आइपुग्छन्, साथीको रुपमा ।
केही यस्ता हुन्छन्, जो आफूलाई आवश्यक पर्दा मात्रै साथीलाई सम्झिन्छन् । काम नपर्दा वास्ता समेत नगर्नेहरु आफ्नो काम परेपछि चेपारे घस्दै जोडिन आउँछन् । होसियार ! यस्ता साथीहरु पनि तपाइँको साथको लायक छैनन् ।
काठमाडौँ, १ साउन । बन्दाबन्दीका कारण झण्डै चार महिनादेखि व्यावसायिक उडान ठप्प रहेको मुलुकको एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अझै
महिलाले पुरुषको के कस्ता कुराहरुमा ध्यान राख्छन् ! अधिकांश महिलाहरु आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाहमा आम पुरुषभन्दा बढी चासो राख्छन् । महिलाहरु
यस्ता छन् नारीका ३२ लक्षणहरु, जानी राखौ ! नारी ईश्वरको अद्वितिय, सुन्दर र रहस्यमयी रचना हो । भनिन्छ, नारीलाई बुझ्न असम्भव
रोमान्टिक प्रेमी र प्रेमिकाहरुको लागि केही उपयोगी टिप्सहरु ! भनिन्छ मायामा नै संसार अडिक छ । सच्चा प्रेम त्यही हो